Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Nkwenye -> Ezigbo agwa
Ezigbo agwa: [Nkwenye]
Ya mere, ka anyị bịaruo oche amara Chineke nso na-atụghị egwu, ka anyị si otu a nata ebere, ma chọtakwa amara nke ga-enyere anyị aka nꞌoge mkpa.
 Nꞌihi na obibi ugwu nke elu ahụ abụghị ihe dị mkpa ime anyị ụmụ Chineke. Kama ọ bụ iji mmụọ anyị na-efe Chineke. Nke a bụkwa ihe bụ ezigbo obibi ugwu. Anyị bụ ndị Kraịst na-anya isi nꞌihe ahụ Kraịst Jisọs meere anyị, anyị ghọtakwara na anyị enweghị ike ọ bụla ịzọpụta onwe anyị. A sị na e nwere otu onye pụrụ ịnya isi na o nwere ike ịzọpụta onwe ya, onye ahụ gaara abụ mụ onwe m. A sị na ndị ọzọ na-eche na a ga-azọpụta ha nꞌihi ihe ha bụ, a gaara azọpụtakwa m nꞌihi ihe m bụ. Nꞌihi na a mụrụ m nꞌezinụlọ ndị Juu, ezinụlọ si nꞌagbụrụ Benjamin pụta. E biri m ugwu nꞌụbọchị nke asatọ site na mgbe a mụrụ m, nke mere ka m bụrụ onye Juu nꞌezie. Karịsịa, eso m nꞌotu ndị Farisii, ndị ahụ ọ na-anụ ọkụ nꞌobi idebe iwu nile na omenala nile ndị Juu nwere.
2 KỌRINT 3:1-4
 Okwu ndị a nile anyị na-ekwu o gosiri na anyị na-anya isi nꞌime onwe anyị? Dị ka ndị ọzọ na-eme, ọ̀ dị anyị mkpa iwetara unu akwụkwọ nke ga-akọwa ụdị mmadụ anyị bụ? Ka ọ̀ dị mkpa ka anyị rịọọ unu ka unu nye anyị akwụ-kwọ nke ga-ezi ndị ọzọ ịma mma anyị? Nꞌezie, akwụkwọ ọ bụla adịghị anyị mkpa, nꞌihi na unu onwe unu bụ akwụkwọ e dere iji kọwaa ụdị mmadụ anyị bụ nke mmadụ nile nwere ike ịhụ na ịgụ. Nꞌihi na mgbe ndị mmadụ hụrụ mgbanwe dị na ndụ unu, ha ga-ahụ ọrụ ọma anyị rụrụ nꞌetiti unu. Ọ pụtara ìhè na unu bụ akwụkwọ ozi si nꞌebe Kraịst nọ bịa, nke anyị dere. Ọ bụghị ihe e ji mkpịsị akwụkwọ dee na mbadamba nkume, kama e dere ya nꞌobi mmadụ site na mmụọ Chineke na-adị ndụ. Anyị pụrụ ikwu ụdị okwu a banyere onwe anyị nꞌihi na anyị nwere ntụkwasị obi nꞌime Chineke site na Kraịst, na ọ ga-enyere anyị aka iguzosi ike nꞌeziokwu ahụ anyị na-ekwu.